Kuyini ukuphazamiseka? - Mytika Speak
Ikhaya / Imibono, iziphazamiso nezimpawu / Kuyini ukuphazamiseka?
Ukuphazamiseka yinoma yini ehambisa amandla kude nephuzu lokugxila.
Iziphazamiso ziza ngezindlela ezahlukahlukene ezifana nezingcingo, ithelevishini, umsakazo, iphephandaba, abantu, imidlalo, izinkinga, njll.... Kaningi, iziphazamiso zivimbela ukuxhumana ne-True Self futhi zivimbele abantu ekugxileni emgomweni oqondayo.
Lapho isiphazamiso siqala ukuncipha, ezinye iziphazamiso zingahlasela.
Isibonelo, uma othile ezama ukuzindla, angaqaphela ukuthi ucingo lwakhe ngeke luyeke ukukhala. Lapho sebekwamukele lokhu njengokuphazamiseka okusobala futhi bavala ucingo, bangathola ukuthi insimbi yomnyango iqala ukukhala, inja iqala ukukhonkotha, noma umakhelwane wabo anqume ukugunda utshani babo.
kudla ingqondo yakho
zigwinya isikhathi sakho
ukunakwa manje sekuphelile
ukususa isisusa sakho
ukuthola inhloso yakho
ngenkathi ugcina ukulawula
Amathegiukuqonda ukuphazamisa ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya
Kungani izinkolelo ezingezinhle zikhona?